« IZAY MAMINDRA FO, MAMINDRA AINA » | FKMP
« IZAY MAMINDRA FO, MAMINDRA AINA »
Kristianina miisa 186 teo ho eo, avy Lille, Prisches,Troyes, Reims, Evry, ary Paris, no nifamotoana tao amin’ny Lycée Saint Charles, Athis-Mons, ny 14-15-16 Mey 2016 lasa teo, nanatanteraka ny Zaikam-paritry ny Faritra Avaratra. Telo andro niarahana nivavaka, sy nifanakalo hevitra manodidina ny lohahevitra hoe « Izay mamindra fo, mamindra aina ». Ny taona 2016 rahateo, dia natokan’ny Fiangonana Katolika ho taonan’ny famindram-po.
Tao aorian’ny lamesa fanokafana, dia i Mompera Jean Berlin Mahaligny, avy ao Troyes, no nitarika ny valan-dresaka manodidina izany lohahevitra lehibe izany. Nandritra io valan-dresaka io ihany koa no tonga nitsidika ny Mpizaika, ny Eveka tompon-tanàna, dia I Monseigneur Dubost, Evekan’ny Evry. Ny andron’ny Sabotsy moa dia nifarana tamin’ny takarivam-pianakaviana, izay nanehoan’ny tanàna tsirairay avy ny fahaiza-manaony amin’ny hira sy ny dihy Malagasy, ka tonga amin’ilay fitenenana manao hoe “sakamalaho sy havozo, ka samy manana ny hanitra ho azy”.
Ny andron’ny Alahady kosa dia nitohy ny fandaharana, tamin’ny dinidinika isam-baomiera, sy ny tolakandrom-pialam-boly, izay noelanelanin’ny lamesa lehiben’ny Pantekôty, nentanin’ireo tanora avy amin’ny Faritra Avaratra. Ny andron’ny Alahady moa dia nifarana tamin’ny takariva fiderana, izay nanehoan’ny Vaomiera isan-tsokajiny avy, ny famintinana ny dinidinika nataon’izy ireo avy, tamin’ny alalan’ny hira, sy dihy ary sombin-tantara.
Nandritra iny Zaikam-paritra iny dia nisy ny hetsika fivarotana zava-pisotro nokarakarain’ireo tanora, izay natao indrindra hanohanana ireo izay hamonjy ny JMJ, ny volana Jolay ho avy izao. Io ihany koa izany no fotoan-dehibe manaraka, izay handraisan’ireo tanora rehetra avy amin’ny lafy valon’i La Frantsa anjara, hisolo tena antsika, amin’ny JMJ izay hotontosaina any Cracovie.
Raki-tsary vitsivitsy nalain’i Vololona RAZAFINDRAKOTO
Previous Post: Alatsinainy 06/06/2016 (Mt 5,1-12)
Next Post: SAKRAMENTA : LOHARANOM-PAHASOAVANA